Ukungena kweNkqubela: i-Segway Human Transporter
I-Segway Human Transporter
Into eyayiyinto eyimfihlakalo eyadalwa nguDean Kamen - eyayinabantu bonke becinga ukuba yayiyintoni - ngoku iyaziwa njengeSegway Human Transporter, okokuqala ukulinganisela, umatshini wokuthutha ugesi. I-Segway i-Human Transporter iyisistim sokuthutha somntu siqu esisebenzisa i-gyroscopes ezintlanu kunye nekhompyutheni eyakhelwe ukuba ihlale ilungile.
I-Segway Human Transporter yavezwa kuluntu ngoDisemba.
3, 2001, eBryant Park kwisiXeko saseNew York kwiprogram ye-ABC yeNtsasa ekuseni "Good Morning America."
I-Segway yokuqala ye-Human Transporter ayisebenzisi i-brakes kwaye yenza i-12 mph. Isantya kunye nesiqondiso (kubandakanywa ukuyeka) kwakulawulwa ngumlinganiselo wokuguqula umgibeli kunye nenkqubo yokuguqulwa kwamanqaku kwelinye leedbbbars. Umboniso wokuqala wabantu wawubonisa ukuba iSegway yayingakwazi ukuhamba ngokukhawuleza kwinqanaba lomhlaba, ingca, ingca kunye nemithintelo emincinci.
Iqela likaDean Kamen liphuhlise ubugcisa bekhampani inkampani ebizwa ngokuthi "Dynamic Stabilization," eyona nto ibalulekileyo yeSegway. Ukuzinza okuzinzileyo kwenza u-Segway ukulungelelanisa ukuzisebenzisela ukuhamba ngokunyanisekileyo kunye nokunyakaza komzimba. I-Gyroscopes kunye neentloko ezijikelezayo kwi-Segway HT ilandele i-center ye user of gravity malunga nama-100 ngesihlandlo sesibini. Xa umntu egxina kancane phambili, i-Segway HT iya phambili. Xa uthembela emva, i-Segway iyahamba.
Inkokhelo enye yebhetri (ngeendleko zeentente ezili-10) ihlala iekhilomitha ezingama-15, kwaye i-Segway HT eyi-65 yeekiti iyakwazi ukugijima kwizandla zakho ngaphandle kokubangela ukulimaza.
Inkonzo yeposi ye-US, iNkonzo yeSizwe yePaki kunye nomzi wase-Atlanta kwintsimi yahlolwa. Umboleki wakwazi ukuthenga iSegway ngonyaka ka-2003 ngexabiso lokuqala eli-3,000.
I-Segway yavelisa imifanekiso emithathu eyahlukileyo yokuqala: i-series, i-series, kunye ne-p-series. Nangona kunjalo, ngo-2006 u-Segway wenqumla yonke imodeli yangaphambili waza wamemezela ukuqulunqwa kwesibini. I2 kunye ne-x2 kwakhona kwavumela abasebenzisi ukuba bahambe ngokubambelela kwiiphatha zokubamba ngakwesokunene okanye kwesobunxele, ezifanisa nabasebenzisi ukuba baxhomekeke phambili baze babuyele ukukhawuleza nokuhlaziya.
UDean Kamen kunye 'neGinger'
Inqaku elilandelayo libhalwa ngo-2000 xa i-Segway Human Transporter yayingummangaliso owaziwa kuphela ngegama layo, "Ginger."
"Ukuphakanyiswa kwencwadi kuye kwaphakamisa intlonelo malunga nemfihlelo eyimfihlo eyenziwa njengeyona mkhulu kune-intanethi okanye i-PC, kunye noDean Kamen ngumvelisi.I nqaku ithi uGinger ayikho ifoni yezokwelapha, nangona uKamen uye wadala ezininzi izinto zezokwelapha. I-Ginger ifanele ibe yinto evuyisayo ezayo emibini, iMetro kunye nePro, iya kubiza i-$ 2000, ibe yinto elula ukuyithengisa. I-Ginger iya kuguqulela ukucwangcisa izixeko, ukudala ukukhuphaza kwamashishini athile asele kwaye ingaba ngumhlobo onobubele Umhlaba unobutsha obutsha. UDean Kamen, umvelisi owaziwayo kunye nombono ophethe amalungelo angaphezu kwama-100 ase-US uye wavelisa ipropati yokuphumelela, iGinger ebizwa ngokuba nguGinger.
"Ukuqiqa kwam, emva kokukhangela i-patents uDean Kamen ngoku kwaye uyayifunda emva kokufunda malunga nomvelisi, ukuba iGinger iyisisitye sokuthutha esicinga kwaye ayifuni i-petroli. Ingcamango yam kaMnu Kamen kukuba nguyena mvelisi Izwi - iinjongo zakhe ziphucula ubomi kwaye umntu uyayikhathalela inhlalakahle yexesha elizayo lehlabathi. Kungakhathaliseki ukuba i-Ginger ingubani, intsingiselo yam iyitsho ukuba iGinger izakufaka impembelelo yokuba zonke i-hype 'zibiza.
Iimpawu Eziziwayo Ngothando
I-American Revolution: I-Battle of Waxhaws
Ukusebenzisa i-Word Tamaño yesiSpain